SI FIICAN U EEG: Xulka Iceland oo sawirkan DHIIRO Galin ka qaadanaya ka hor kulankooda caawa ee England – Gool FM
SI FIICAN U EEG: Xulka Iceland oo sawirkan DHIIRO Galin ka qaadanaya ka hor kulankooda caawa ee England
(France) 27 Juunyo 2016. Xulka Ingiriiska ayaa daqiiqado yar kaddib la ciyaari doona xulka Iceland wareega 16-ka ee Euro 2016.
Haa, waa sax xulka Iceland waa dal yar waa xul yar oo markii ugu horreyay yimid Euro iyo wareegiisa 16-ka. Laakiin, waxaa dhiiro galinaya Iceland sawir qosol leh, waa EEY bursanaya RHINO (Wiyil), ma ahan wax isku dhigma oo xajmigooda boqolkiiba boqol waa kala wayn yahay, yeelkeede, waa wax dhacay.
Iceland ayaa lagu soo waramayaa in shirarkeeda ay soo dhigto sawirkaa oo waliba erayo dhiiro galin ah ku sii hoos qoran tahay, taa oo micnaheedu yahay inay mari karaan Muruq wayn kasta oo ay isku arkaan Euro.
Haddaba Malaga yaabaa in Ingiriisku sheekadan qabsato kulanka caawa?
SAWIRRO: Ka bogo sawirro lagasoo ururiyey taageerayaasha Spain & Talyaaniga!